साइबर क्राइम Archives - Lokpati.com
Tag - साइबर क्राइम
साइबर क्राइमविरुद्ध सचेतना अभियानमा प्रियंका र आयुष्मान
काठमाडौं, २७ चैत । साइबरको बढ्दो पहुँचसँगै दुरुपयोग र अपराध पनि बढ्न थालेपछि साइबर क्राइमविरुद्ध जनचेतना अभियान शुरु भएको छ ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रका हस्ती अभिनेत्री प्रियंका कार्की र अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशी साइबर...
काठमाडौँ, ९ फागुन । सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर कोही कसैलाई जिस्क्याउने वा होच्याउने गर्नुभएको छ ? वा रमाइलो त हो नि भन्दै विद्युतीय माध्यममा कोही कसैको अपमान त गर्नुभएको छैन ? यदि त्यसो गर्नुभएको छ भने अब...
साइबर क्राइम : कुन उमेरका कति संलग्न ?
काठमाडौँ, २० माघ । आफूले नचिनेको व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमा साथी बनाउँदा साइबर अपराध बढेर गएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै फेसबुक, ट्वीटर, भाइवर, गुगलजस्ता सञ्जालमा नयाँ खाता खोलेर मानिसले पैसा लुट्ने...
चरित्रहत्या र देश बिखण्डन गर्नेलाई १५ वर्ष जेल
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय अपराध नियन्त्रण गर्न नयाँ कानूनको मस्यौदा अघि सारेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट व्यक्तिको चरित्रहत्या र गाली बेइज्यती गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले नयाँ मस्यौदा अघि सारेको हो ।
सामाजिक सञ्जाल र...